EUCAP NESTOR, CIIDAMADA BADA EE MIDAWGA YURUB IYO ILAALADA BADA SISHILIS AYAA SI WADA JIRA U QABTAY DHOOLA-TUS LAGULA TACAALAYAY BUDHCAD-BADEEDA | Eunavfor Eunavfor
EUCAP Nestor, Ciidamada Bada ee Midawga Yurub (CBMY) iyo Ilaalada Xeebaha ee Sishilis ayaa waxay wada qabteen dhoola-tus budhcad-badeed lagula dagaalamo.
Dhoola-tuska waxaa ku jiray: iyadoo si wada jira ay CBMY iyo Ilaalada Xeebaha ee Sishilis ay u qabanayaan doon budhcad-badeed oo laga shakiyayo oo joogtay biyaha Sishilis. Markabka Xeebaha Ilaaliya ee Topaz iyo Helikobtar ka socotay markabka ciidamada bada ee Faransiisku ee loo yaqaan LHD Tonnerre kaasoo hoos yimaada CBMY ayay si wada jira waxay u fara-galiyeen doonta budhcad-badeed ee laga shikiyay.
Ujeedada Dhoola-tuskani waxa uu ahaa in kor loogu qaado wada shaqaynta iyo iskaashiga ka dhexeeya Ilaalada Xeebaha ee Sishilis iyo CBMY iyo waliba sidii kor loo horamarin lahaa ilaalada xaabuhu u leeyihiin maamulka cadaymaha.
“Dhoola-tuskani wuxuu tusaale fiican u ahaa sida aan u wada shaqayno Sishilis iyo CBMY” ayuu yidhi Admeral Launay. “Aad baan ugu farxay wada-shaqaynta dhaw iyo wada shaqaynta xidhiidhka ah.”
“Waan soo dhawaynaynaa taakulada aan ka helnay saaxibadayada Midawga Yurub. Tani waxay kor u qaadaysaa awooda aan kula dagaalano budhcad-badeeda waxayna xaqiijinaysaa nabadgalyada bada ee Sishilis” ayuu yidhi Taliyaha Ilaalada Xeebaha Sishilis, Kornayl George Adeline.
Khubaro ka socota EUCAP Nestor ayaa saarnaa markabka Topaz si ay talo uga bixiyaan loo maamulo budhcad-badeeda laga shakiyo iyo cadaymaha laga qaado doonta. EUCAP Nestor waxay Ilaalada Xeebaha ee Sishilis la diyaarinaysaa buug tusmo ah oo ku saabsan habka loo maamulo cadaymaha.
Admiral Launay, kornayl Adeline iyo tiro marti-sharaf ah ayaa iyana saarna markabka Topaz si ay u indha-indheeyaan dhoola-tuska: Ku Xigeenka Taliyaha Hawlgalada CBMY Admeral Dhexe Eric Dupont, Taliyaha Tonnerre, Kabtan Jean-Francois Quérat, Safiirka Faransiiska, Mudane Geneviève Iancu iyo Ergayga Sare ee Ingiriiska Mudane Lindsay Skoll.
“Waxaa isoo jiitay xirfada Ilaalada Xeebaha ee Sishilis” ayuu yidhi kabtan Quérat oo ah kabtanka Tonnerre “waxay muujiyeen inay ka go’an tahay la tacaalida khatarta budhcad-badeeda.”
Tonnerre oo joogay sishilis ilaa Isniintii waxay amba-baxaysaa barri Sabtida si ay u sii wado safarkeeda.
Kani waa dhoola-tuskii ugu horeeyay ee ay si wada jira u qabtaan CBMY, EUCAP Nestor iyo ilaalada Xeebaha ee Sishilish.
“Dhoola-tuskani waxa uu muuqaal fiican oo la taaban karo u yahay qorshaha dhamayskatiran ee Midawga Yurub ugu tala galay nabad galayada bada ee gobolka” ayuu yidhi Admeral Dhexe Dupont. “Maadama oo EUCAP NESTOR iyo CBMY aanay sidan waligood u wada shaqaynin, waxaan filaynaa inay tani noqoto talaabadii ugu horaysay ee dhoolo-tusyo joogta ah taas oo awood u siin doonta is-fahan wada jir ah iyo in la hagaajiyo amaanka bada ee gobolka. Iyaga oo fulinya hawshooda CBMY waxay gacan buuxda ku siinayaan shaqada EUCAP Nestor ee gobolka.”
Hada wakhtigan waxaa Sishilis jooga afar khabiir oo ka socda EUCAP Nestor oo ka shaqaynaya tayada Ilaalada Xeebta ee Sishilis, Ciidamada Cirka ee Sishilis iyo Garsoorka si loo fuliyo hawlgalada nabadaynta bada, gaar ahaan la dagaalanka budhcad-badeeda.
Su’aa;aha dheeraadka fadlan la soo xidhiidh:
Taliyaha Ciidanka Jacqueline Sherriff
EU Naval Force (EU NAVFOR)
+248 253 2099
Major Jean Attala
+248 271 8002
Read more at: https://eunavfor.eu/eucap-nestor-ciidamada-bada-ee-midawga-yurub-iyo-ilaalada-bada-sishilis-ayaa-si-wada-jira-u-qabtay-dhoola-tus-lagula-tacaalayay-budhcad-badeeda/